Filohan’ny FJKM, Andriamahazosoa Irako : « Aoka hanova fisainana sy fomba fiasa isika” | NewsMada
Filohan’ny FJKM, Andriamahazosoa Irako : « Aoka hanova fisainana sy fomba fiasa isika”
Par Taratra sur 18/10/2017
Nampahatsiahy. Nanao antso avo amin’ireo zanaky ny fiangonana misehatra amin’ny ambaratongam-pitondrana rehetra ny filohan’ny FJKM, Andriamahazosoa Irako, omaly. Nisongadina amin’izany ny hafatrafatra manoloana ny fiainam-pirenena.
“Aoka hanova fomba fisaina sy fomba fiasa isika ka, eo anoloan’ny maha olom-pirenena antsika, ny zanaky ny FJKM rehetra, mahatsiaro fa nantsoin’Andriamanitra ho amin’izany, handray anjara mavitrika amin’ny fiainam-pirenena amin’ny sehatra rehetra sy amin’ny toerana rehetra ilana olona eo amin’ny fitondram-panjakana”, hoy izy tao amin’ny tranonkalam-pifandraisana. Nambarany fa mba ho tena kristianina sahy miavaka, sahy madio, ho fitahiana ho an’ny firenena sy fanasin’ny tany tokoa ny zanaky ny FJKM mandray andraikitra eo amin’ny fitondram-panjakana rehetra. “Hanao izany amin’ny toe-panahy kristianina ireo mirotsaka eo amin’ny sehatra politika ho fanasoavana tokoa ny sarambabem-bahoaka ary tsy hitenenan-dratsy ny anaran’i Jesoa Kristy”, hoy izy. Nohitsiny fa politika hoenti-manompo ny vahoaka tokoa ary atao amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra izany mba ho mendrika ny maha zanaky ny FJKM.
Tsiahivina fa anisan’ny nivoitra tamin’ny synaoda tany Antsirabe tamin’ny taon-dasa ny momba izany. “Ny fitaizana ireo zanaky ny FJKM manana andraikitra eto amin’ny firenena. Amin’ny maha mpaminany sy mpitily ho an’ny firenena ny fiangonana ka tsy misalasala ny synoda lehibe manaitra anareo mpitondra fanjakana, mba hijery akaiky ny lafiny ara-tsosialim-bahoaka sy ny zon’ny olom-pirenena , mba hisitraka ny harena nomen’Andriamanitra azy ny vahoaka Malagasy”, hoy ny fehinkevitra.